Wararka Maanta: Jimco, Dec 28, 2012-Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan oo ku Baaqay in la qaado Howlgallo lagu baacsanayo Xarakada Al-shabaab
Mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cel-celiyay inay hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab ay dalka ka baxsanayaan kaddib markii ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ay ku jabiyeen dagaallo ka dhacay deegaanno badan oo dalka ku yaalla.
“Waxaa muuqata in Al-shabaab aysan haysan meel ay uga baxsadaan Soomaaliya, sidaa daraadeed waa in hoggaamiyeyaasha iyo dagaalyahannada kooxdan la qabto ama la dilo, taasoo saldhig u noqon karta in deggenaashaha dalka uu dib u soo laabto,” ayuu yiri Afrax.
Sidoo kale, guddoomiyaha gobolka Hiiraan wuxuu sheegay in Al-shabaab ay saldhigyo ka sameysanayaan deeegaannada Golis ee Puntland qaar ka mid ahna ay aadayaan dalka Yemen, iyagoo doonaya inay ku biiraan kooxda Al-Qaacida ee halkaas ka dagaalanta.
Taliyaha gaaska koowaad ee ciidamada xoogga dalka, Jen. C/llaahi Cali Caanood ayaa dhawaan sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa AMISOM ay dhawaan qabsan doonaan degmada Buulo-burte ayna isku furi doonaan degmooyinka Ceelbuur iyo Xudur oo ku yaalla gobollada Galguduud iyo Bakool.
“Waxaan isku diyaarinaynaa dagaal aan la galno Al-shabaab si aan uga saarno goobaha ay ku harsan yihiin,” ayuu yiri Jen. Caanood oo ka gaabsaday inuu ka hadlo xilliga uu howgalku billaabanayo.
Hoggaamiyaha Al-shabaab ayaa cajalad uu dhawaan soo duubay ku sheegay in Al-shabaab ay weli ka taliyaan dhul ballaaran oo Soomaaliya ku yaalla, ayna diyaar u yihiin inay ka hortagaan wuxuu ugu yeeray cadow kusoo duulay dalka Soomaaliya.
“Sannadkan waxaa lagu soo qaaday mujaahidiinta Soomaaliya dagaal culus oo loo adeegsaday hub culus iyo warbaahinta si loo damiyo isku xukunta shareecada Islaamka, balse innaga waxaa naga go’an inaan ka hortagno cid walba oo doonaysa inay diinta burburiso,” ayuu ku sheegay Sheekh Mukhtaar Abuu-Zubeyr cajalad maqal ah oo uu soo duubay bishan.
Ugu dambeyn, hoggaamiyaha Al-shabaab ayaa sheegay inay la beegsan doonaan ciidamada ku sugan Soomaaliya ee isugu jira AMISOM iyo kuwa Itoobiya dagaallo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah si ay cududdooda u wiiqaan.